🥇 ▷ PhoneClean 4, ka fuulo booskaaga iPhone si badbaado leh Mac iyo Windows ✅
PhoneClean 4, ka fuulo booskaaga iPhone si badbaado leh Mac iyo Windows
Hagaajinta waxqabadkaaga iPhone-ka adiga oo adeegsanaya PhoneClean 4
Xusuusta iPhone-kaaga marwalba waa isbedelaysaa. WhatsApp ah oo aad kuhesho sawir, fiidiyowga xiisaha leh ee ay kuu soo direen, muusikada aad ka qaadatid dhageysiga dariiqa, dalabka aad soo dejisatay si aad iskugu daydid laakiin taasi kuma qancin. Tartiib tartiib iPhone-kaagu wuu buuxsamayaa oo waqtiba aaladda ayaa noqoneysa mid gaabis ah oo ‘culus’ sida loo isticmaalo. Dheeraad ah, iPhone laftiisa waxay abuurtaa wax badan oo ka mid ah hawlgallada iyo faylasha log log taasi waxay sidoo kale kujirtaa xusuusta in kastoo aad ka warqabaan.
PhoneClean waa a Codsiga Isbaanishka ee aad ku dhex ordi karto labada Mac iyo Windows kaas oo aad kaga bixi doonto iPhonekaaga ama iPad-kaaga isla xawaaraha uu ku jiray bilowga. Hadda bidix nooca afraad Iyada oo leh qaabab cusub oo cusub. Waad ku mahadsan tahay PhoneClean waad baabi’ineysaa dhammaan macluumaadkaas aan loo baahnayn Xoreynta booska iyo kordhinta waxqabadka sidaa daraadeed waxay umuuqataa inaad kaliya ka saartay sanduuqa.
Qalabka PhoneClean ee loogu talagalay Mac
Ka dib markii lagu rakibo arjiga furitaanka si aad u bilaawdo qalabkaaga iPhone ama iPad-ka. Waxaan kugula talineynaa inaad xirto iTunes si aysan jirin wax dhibaato ah oo ku saabsan isku-xirnaanta goor dambe. Daqiiqadaha qaar ayaa sidoo kale lagu weydiin doonaa inaad baabi’iso «Raadi iPhone-kayga» laakiin ha walwelin maxaa yeelay ka dib nadiifinta mar labaad ayaa la shaqeysiin doonaa. Ku xir qalabkaaga fiilada kombuyuutarka kumbuyuutarka oo telefoonka taleefanka ayaa diyaar u noqon doona inuu bilaabo shaqada.
Qadka taleefanka ee loo yaqaan ‘PhoneClean interface’ wuxuu soo bandhigayaa dhammaan xulashooyinka si cad oo aan lahayn midabo badan Badhanka Scan weyn oo ku yaal bartamaha shaashadda ayaa kugu martiqaadaya inaad riixdid loogu talagalay TeleClean si ay u falanqeeyaan waxa aaladdaadu ku jirto. Xagga sare, qaab astaamaha, ayaa ah aaladaha nadaafadda ee aad isticmaali karto. Kuwani waa, bidix ilaa midig:
Muuqaal cusub oo ah PhoneClean oo aad ku ilaalin karto iPhone-kaaga nadiifinta qashinka inta aadan isticmaalin. Markaad ku xirto qalabkaaga Wi-Fi gurigaaga, PhoneClean wuxuu bilaabayaa inuu ka shaqeeyo gadaasha, isaga oo xoreynaya meel inta aad nasanayso. Kaliya waa inaad maskaxda ku heysaa in aaladdaadu aysan xirneyn oo hal mar maalintii nadiifinta maalinlaha ah ay shaqeyn doonto.
Nadiifin dhakhso leh
Doorashadan ayaa kuu oggolaaneysa nadiifi qalabkaaga faylasha aan faa’ido lahayn si fudud. Meesha ka saar kaydinta barnaamijyada rakibay, faylalka ku meel gaarka ah ee ay soo saareen, cookies cookies, diiwaanka ciladaha iyo waxyaabo kale oo badan oo qalabkaaga ka dhigaya mid gaabiya.
Ka saar Taariikhda internetka, feylasha ku meel gaarka ah ee la soo saaray markii la daalacanayay Websaydhka oo ka ilaali aaladdaada barnaamijyada basaasinta iyo barnaamijyada xaasidnimada leh.
Ka saar dhamaan macluumaad qarsoodi ah, wac diiwaan, sawirro tirtiray kuwa ka mid ah raad raac iyo inbadan. Waxay sidoo kale tirtiri doontaa tijaabooyinka miirayaasha sawirrada ee aad sameysay ee lagu keydiyo iPhone xitaa haddii aad tirtirto. Sida Waa meel badbaado amaan ah, dhammaan macluumaadkaan lama soo ceshan karo.
Tirtir hadhaagii codsiyada aad raratay iyo ogeysiisyada macruufka ee aad adigu tirtirtay waqtigaas laakiin weli taleefankaaga ku jirta.
Laga soo bilaabo xulashadan waad awoodaa tirtir xiriirada, qoraalada aadan isticmaalin, gelinta taariikhda kaadhadhka horey u soo gudbay, faylal si khaldan ula shaqeeyey iTunes, hagaajinta faylasha si qaldan loo rakibay ama laga kharibay codsiyada si ay uga dhigaan mar labaad inay shaqeeyaan, rakibaan ama dib u dhigaan barnaamijyada oo tirtiraan sawirrada aadan dooneynin inaad soo ceshato.
PhoneClean waa codsi aad u wanaagsan oo lagu ilaalinayo aaladahaaga Apple nadiif iyo soon. Tirada badan ee xulashooyinka ay kuu fidineysaa waxay kuu oggolaaneysaa inaad tirtirto dhammaan faylasha “junk” ee ku harsan iPhone iyo iPad. Intaa waxaa sii dheer, howlaheeda cusub Nadiifinta aamusnaanta iyo aamusnaanta xasilloonida leh, waxay kaa hortagaysaa inaad isha ku hayso nadaafadda maalinlaha ah ee iPhone iyo iPad. Qaar ka mid ah fariimaha uu soo gudbiyay dalabka sifiican looma tarjumin afka Isbaanishka mana ahan kuwa sifiican u qeexan laakiin tani ma dhaawaceyso ku shaqeynta barnaamijka saxda ah.
U soo dejiso PhoneClean 4 oo loogu talagalay Mac iyo Windows
Haddii aadan haysan arjigaan Mac-gaaga, waxaad ku rakibi kartaa khadka tooska ah ee ka soo degsiga, bogga shabakadda soo-saaraha, oo aad ka heli doontid hoosta. Xusuusnow in codsigan sidoo kale lagu soo dejisan karo oo lagu rakibi karo kombiyuutarada leh nidaamka hawlgalka Windows.
Kalasoco PhoneClean 4
Xusuusnow, marka la cusbooneysiisto PhoneClean 4 waxaad ka ilaalin kartaa iPhone-ka iyo ipadka nadiifka ah kombuyutarkaaga (Mac / Windows), oo ay u dheer tahay inaad haysato xulasho badan oo intaa ka badan.